Daawo:- Gabar hooyadeed ay tahay Al-shabaab oo Su’aalo la weydiinayo!!!! | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Daawo:- Gabar hooyadeed ay tahay Al-shabaab oo Su’aalo la weydiinayo!!!!
Mar 31, 2015 - Comments off	Booliska dalka Ingiriiska ayaa su’aalo weydiinaya haweeney Soomaaliyeed oo sida la sheegay hooyadeed ay ka tirsan tahay saraakiisha sar sare ee Xarakadda Al-Shabab.
Gabadhaan oo la yiraahdo Amaal Faarax ayaa sheegtay markii ay guriga u garaaceen ciidamo ka tirsan kuwa amaanka kadibna ay iyada la baxeen oo ay su’aalo hooyadeed ku saabsan weydiiyeen
Booliska ayaa gabadhaan hooyadeed ku eedeeyay inay ka tirsan tahay hogaamiyaasha Al-Shabab oo ay williba awood badan Al-Shabab ku dhex leedahay
Amaal hooyadeed oo la yiraahdo Faadumo Jaamac ayay boolisku ku sheegeen inay iyadu guri ay magaalada Nairobi ka degenayd ay ku qarisay kooxdii weerartay suuqa Westgate sanadkii 2013.
Faadumo oo Al-Shabab dhexdiisa looga yaqaan Mama Shabab ayaa sidoo kale bixisa dhaqaalaha loo adeegsado maalgalinta kooxaha loo diyaariyo inay is qarxiyaan.
Haweeneydaan ay hay’adaha amaanka magaceeda soo bandhigeen ee Faadumo Jaamac la yiraahdo ayaa la aaminsanyahay inay Ingiriiska kasoo tagtay 5 sanno ka hor waxaana ay u dhaxaysaa Soomaaliya iyo Kenya ayadoo badashay dhamaan aqoonsiyadeeda sida uu lagu qoray wargayska Daily Mail ee Ingiriiska kasoo baxa.
Booliska Ingiriiska waxay sheegayaan in haweeneydaan ay si gaar ah guryo ugu diyaariso dadka inay is qarxiyaan la doonayo iyo ajaanibta Shabab ka mid ah.
“Waxay I weydiiyeen su’aalo badan oo aan ku jahwareeray oo hooyo ku saabsan waxaana u sheegay inay ila tahay inaanan waligay arkayn hooyadey oo ka mid noqotay dagaalamayaasha Al-Shabab.” Sidaas waxaa tiri Amaal Faarax oo gabar Soomaaliyeed oo Britain ku nool.
Amaal waxay sidoo kale u sheegtay Telefishin Ingiriiska ku yaala in loo sheegay in hooyadeed uu guursaday hogaamiye Al-Shabab ka tirsan.
Soomaali badan oo qurbaha ka yimid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabab qaarkoodna waaba ay is qarxiyeen waxaana ay galaafteen nolosha dad badan oo Soomaaliyeed.